Wararka Maanta: Talaado, Apr 9 , 2013-Mareykanka oo Saanad Milateri ugu deeqay Dowladda Somalia si loo Adkeeyo Awoodda Ciidamada Soomaaliya
Qoraal uu Obama u diray xoghayihiisa arrimaha dibadda, John Kerry ayuu ku sheegay inuu go’aansaday inuu saanad ciidan oo uu hub ku jiro u diro Soomaaliya, isagoo sheegay in taasi ay xoojinayso ammaanka Mareykanka iyo midka dunida oo dhan.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maryekanka ayaa sheegay in xilligan aysan habboonayn in Soomaaliya hub loo diro, balse ay ahayd in tallaabadan la qaado mustaqbalka, balse ma uusan muujin wax diidmo ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa isku dayaysa inay dalka ka saarto colaado soo jiray muddo 22-sano ah, iyadoo dowladdan ay noqonayso tii ugu horreysay oo rasmi ah oo ay yeelato Soomaaliya, waxaana Mareykanku uu noqday dalkii ugu horreysay oo aqoonsada dowladda cusub ee Soomaaliya.
“Mareykanka wuxuu go’aansaday inuu si qoto-dheer uga caawiyo Somalia dhismaha ciidamada, si ay dalkooda u difaacaan una noqdaan kuwo aqoon ciidannimo leh,” ayay tiri afhayeenadda golaha ammaanka Qaranka Mareykanka, Caitlin Hayden.
Soomaaliya ayaa waxaa si tartiib-tartiib ah ugu soo laabanaya ammaanka tan iyo markii ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa gacanta siinaya ee AMISOM ay ku guuleysteen inay Muqdisho oo dhan ka saaraan kooxda Al-shabaab. Balse Al-shabaab uma muuqato koox laga adkaaday, waxaana weli Mareykanka walaac ku haya hanjabaado kaga imaanaya Al-shabaab.
“Go’aanka Obama ma ahan mid ku yimid hanjbaad cusub oo Marekanka uga timid Soomaaliya,” ayuu yiri sarkaal sare oo Mareykan ah kaasoo diiday inuu sheego magaciisa, maadaama aan loo ogoleyn inuu arrintan ka hadlo.
Mareykanka ayaa taageero dhaqaale iyo tababar siiya ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomalaiya si ay ula dagaalamaan Al-shabaab, isagoo ku bixiyay lacag ka badan 133-milyan oo doollar. Iyadoo go’aankan uu muujinayo inuu Obama doonayo inuu xiriir milateri la sameeyo Soomaaliya oo uu rumeysan yahay inay Al-Qaacida weli awood badan ku leedahay.
Saanadda milateri ee Mareykanku uu siinayo Soomaaliya ayaa waxaa ku jira hub ay ka mid yihiin gantaallada lagu burburiyo taangiyada, hubka fudud iyo kuwo u fududeynaya ciidamada dowladda inay meelo fog ka dagaalamaan.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii hore sheegay in labada bilood ee soo socota uu Soomaaliya soo gaarayo hubkii ugu horreeyay si awoodda ciidamada loo xoojiyo, dalkana looga saaro xoogagga Al-shabaab ee ka horjeeda dowladda.
4/9/2013 1:08 AM EST